Akụkọ - Kedu ihe na -emetụta ịkpụ laser?
CO2 Laser Ịcha Machine
1313 igwe ịcha laser
1325 Laser Ịcha Machine
1390 Laser Ịcha Machine
1610 igwe ịcha laser
6090 Laser Ịcha Machine
CNC rawụta Ịcha Machine
1325 igwe na -akpụ osisi
Igwe ịcha Plasma
Igwe nchacha Plasma 1530
1560 Igwe Mbelata Plasma
Igwe ịcha Plasma 2060
2060 Fiber Laser Ịcha Machine
4515 Fiber Laser Ịcha Machine
Kedu ihe ndị na -emetụta ịkpụ laser?
Kedu ihe bụ ihe na -emetụta eserese laser?
Lasers nwere ike rụọ ọtụtụ ụdị igwe. Dị ka ọgwụgwọ ikpo ọkụ nke ihe, ịgbado ọkụ, ịcha, ịkụ ọkpọ, ịkpụ na micromachining. CNC laser osise igwe nhazi ihe: organic osisi, ákwà, akwụkwọ, akpụkpọ anụ, roba, arọ osisi, kọmpat efere, ụfụfụ owu, iko, plastic, na ndị ọzọ na-abụghị dara ihe. Ejiwo teknụzụ ịkpụ laser CNC n'ọtụtụ ebe dị ka ụlọ ọrụ igwe, ụlọ ọrụ eletrọnịk, nchekwa mba na ndụ ndị mmadụ. Kedu ihe ndị bụ isi na -emetụta igwe CNC laser osise?
Enwere isi akụkụ isii ndị a:
1. Mmetụta nke ike nrụpụta na oge irradiation
Ike nrụpụta laser buru ibu, oge irradiation dị ogologo, ike laser nwetara site na ọrụ ọrụ buru ibu. Mgbe a na -elekwasị anya n'elu ihe a na -arụ ọrụ, ka ikike ike mmepụta laser na -ebuwanye ibu, nke buru ibu na nke miri emi bụ, na taperị dị obere.
2. Mmetụta nke ogologo etiti na akụkụ dị iche
Osisi laser nwere obere ọdịiche dị iche nwere ike nweta ntụpọ pere mpe na njupụta ike dị elu na ụgbọ elu lekwasịrị anya mgbe ọ gafesịrị oghere na -elekwasị anya na ogologo ihu. Obere oghere ntụpọ dị na etiti ihu ya, enwere ike ịkpụcha ngwaahịa ahụ nke ọma.
3. Mmetụta nke ọnọdụ mgbado anya
Ọnọdụ lekwasịrị anya na -enwe mmetụta dị ukwuu n'ụdị na omimi nke olulu nke ọrụ a pịrị apị kpụrụ. Mgbe ọnọdụ mgbado anya dị ala, mpaghara ntụpọ ọkụ gafee akụkụ ọrụ ahụ buru oke ibu, nke na -abụghị naanị na -emepụta nnukwu mgbịrịgba, kamakwa ọ na -emetụta ịdị omimi nke igwe n'ihi mmasị njupụta ike. Ọ bụrụ na mgbado anya na -abawanye, omimi nke olulu na -abawanye. Ya mere, ekwesịrị idozigharị anya dabere na usoro ọrụ ọrụ chọrọ.
4. Mmetụta nke ikesa ike n'ime ntụpọ
Ịdị ike nke ọkụ ọkụ laser dịgasị iche site n'otu ebe ruo ebe ọzọ, a na -ekesa ume n'ụzọ ziri ezi na obere oghere nke ebe a na -elekwasị anya, na oghere ndị osisi ahụ na -emepụta nwere nha. Ma ọ bụghị ya, oghere ndị a tụrụ atụ abụghị nke symmetrical.
5. Mmetụta nke ọnụ ọgụgụ mkpughe
Ihe omimi nke igwe ahụ bụ ihe dị ka okpukpu ise nke obosara uzo, na taperị buru ibu.Ọ bụrụ na ejiri laser ọtụtụ oge, ọ bụghị naanị omimi nwere ike ịbawanye nke ukwuu, enwere ike belata taper, na obosara fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu. .
6. Mmetụta nke ihe eji arụ ọrụ
N'ihi ụdị dị iche iche na -amịkọrọ ike dị iche iche nke ihe dị iche iche na -arụ ọrụ, ọ gaghị ekwe omume ịmịkọrọ ike laser niile anakọtara na workpiece site na oghere, a na -egosipụta ma ọ bụ atumatu ma gbasaa akụkụ dị ukwuu nke ume. Ọnụ mmịkọ a na -emetụtakwa ụdịdị nke ihe ndị na -arụ ọrụ yana ogologo ntụgharị laser.
Oge nzipu: Dec-28-2020